Tsy ilaina ny fihibohana… saina | NewsMada
Tsy ilaina ny fihibohana… saina
Mbola ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana izao… Ady amin’ ny fihanaky ny valanaretina. Ao anatin’izany ny fihibohana an-trano. Mila famolahan-tena ? Indrindra ho an’ny tsy mahatombin-tsiraka, lava tongotra… Eo ihany koa ny hoe : ny tongo-dava no ahitan-kanina, ny fitadiavana mahazaka maniraka…
Na izany aza, lava kokoa amin’ izao ny fifankahitana sy fihaonan’ny ankohonana manontolo tafavory ao an-tokantrano. Amin’izany, mazava ho azy ny hoe : iza no manao inona, iza no aiza… ? Nefa tsy mandeha ho azy izany rehefa ho lava, na tsy hita izay atao, na tery tsy misy ivalamparana firy ny toerana misy ny tena…
Any amin’ny firenena sasany, amin’izao ady izao : saika mandeha ho azy sy manjaka ny fanaovana he­risetra amin’ny zaza amam-behi­vavy. Anisan’ny nampiaka-peo ny eo anivon’ny Firenena mikambana (ONU), ohatra, izany. Nahoana ? Misy ny mihiboka mbamin’ny saina amin’izao hoe fihibohana an-trano izao.
Loza iray, loza roa… Zary tsy mam­pilamina sy mampitony ny fi­fan­kahitana sy ny fihaonana mito­hitohy, fa fifampilana kisa. Mi­harihary ny fahabangana eo amin’ ny fifankahalalana sy fifankaha­zoana, na eo amin’ny samy mpiana­kavy izao aza. Tsy hita be ihany izay tena fifankatiavana sy fifampitoki­sana ?
Mila mazava sy matotra kokoa ny fomba fijery ny fiainana : tsy fitanana sy fanatsarana fahavelomana fotsiny amin’ny fitadiavana, na eo aza ny fahasahiranana. Izany aza tsy hita sy tsy vita ? Sao ny saina mihiboka amin’izay niainana hatramin’izay no antony… Manao izay ivelomana fotsiny sisa, dia izay.
Fotoana fandinihan-tena amin’ izay atao izao, amin’ny fifandraisa­na amin’ny hafa : miainga eo an-tokantrano, ny manodidina… Sao izay no tsy nampilamina sy tsy nampiadan-tsaina hatramin’izay ? Na ny fifankahitana maharitra ao an-tokantrano aza manahirana ny sasany noho ny saina mihiboka…
“Ny fiadanana dia tsy hoe tsy fisian’ny ady, fa hatsaram-piton­dran-tena, toe-tsaina, finiavana ho amin’ny halem-panahy, fahatoki­sana, fahamarinana”, hoy ny filozofa iray izay, i Spinoza.